WTE ဒီဂျစ်တယ်ပုံသေပလက်ဖောင်း - World Trade Exchange
နှင့်အတူဝယ်ယူရန် ငွေမချ! စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ ချေးငွေမစစ်ဆေးပါ စုဆောင်းခြင်းမရှိပါ ငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိပါ All-In-One စီးပွားရေးဘဏ္ANCEာရေး စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ ချေးငွေမစစ်ဆေးပါ စုဆောင်းခြင်းမရှိပါ ငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိပါ All-In-One စီးပွားရေးအဖြေ All-In-One ကြီးထွားမှုအဖြေ 100X ရရှိမှု:100X အမြတ် 100x ငွေစီး 100x ချေးငွေ 100x အရင်းအနှီး 100X စီးပွားရေး နောက်ကျော 95% ငွေ ဝယ်ယူမှုအားလုံး စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ ချေးငွေမစစ်ဆေးပါ စုဆောင်းခြင်းမရှိပါ ငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိပါ
သင့်ဝင်ငွေကို ၁၀၀x ဖြင့်မြှောက်ပါ
ဖန်တီးခြင်းဖြင့်ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုဖန်တီးခြင်းသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း 100X သင်၏ဝင်ငွေကိုရရှိရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရ၏ပုံနှိပ်တိုက်များကဲ့သို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုတရားဝင်အလိုအလျောက်ဖန်တီးခြင်းဖြင့်ရက် ၃၀ အတွင်းသင်၏ဝင်ငွေကို ၁၀၀x တိုးနိုင်သည်။
တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်သည်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်စက္ကန့် ၆၀ အတွင်းဒေါ်လာ ၁ သန်း၊ ၁၀ သန်း၊ ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောပါးလွှာသောလေထုထဲမှဖန်တီးနိုင်သည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ဖန်တီးခြင်းသည်ရက် ၃၀ အတွင်းသင်၏ဝင်ငွေကို ၁၀၀X တိုးမြှင့်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သာမှတဆင့်ရယူသည် World Trade Exchange ပလက်ဖောင်း။
အဆိုပါ World Trade Exchange platform သည်သင်၏ဝင်ငွေကိုစက္ကန့် ၆၀ အတွင်းကလစ်တစ်ချက် နှိပ်၍ ရက် ၃၀ အတွင်း ၁၀၀x သို့မြှောက်ရန်သင့်အားကူညီပေးသည့်တစ်ခုတည်းသော platform ဖြစ်သည်။
ယင်းမှတဆင့် WTE အောက်ပါဖောက်သည်များသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း 100X ၀ င်ငွေရရှိသည်။
Lewes Hendon သည်သူ၏ဝင်ငွေကို ၁၀၀x တိုး။ ရက် ၃၀ အတွင်း ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၇၅၀ ရရှိခဲ့သည်။
Brock Kosslyn သည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအမြတ်ငွေကို ၁၀၀X နှင့်မြှောက်။ ရက် ၃၀ အတွင်းဒေါ်လာ ၆၄၀ မီလျံရရှိခဲ့သည်။
Saundra Toedtling သည် ၁၂ လဝင်ငွေရည်မှန်းချက်ကို ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၆၀၀ မီလီယံသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Colan Wallace-brown သည်သူ၏ရောင်းအားကို ၁၀၀x တိုး။ ရက် ၃၀ အတွင်း ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၁၀၀ ရရှိခဲ့သည်။
Taddeo Hatano-cohen သည်သူ၏ရောင်းအားကို ၁၀၀x နှင့်မြှောက်။ ရက် ၃၀ အတွင်းဝင်ငွေဒေါ်လာ ၃၂၀ မီလျံရရှိခဲ့သည်။
Deck Lisbon သည်သူ၏ဝင်ငွေကို ၁၀၀X နှင့်မြှောက်။ ရက် ၃၀ အတွင်း ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၅၅၀ ရရှိခဲ့သည်။
Lenci Leakey သည်သူ၏ရောင်းအားကို ၁၀၀x နှင့်မြှောက်။ ရက် ၃၀ အတွင်း ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၆၀၀ ရရှိခဲ့သည်။
Vinson Costantini သည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ၁၀၀x တိုး။ ရက် ၃၀ အတွင်းဝင်ငွေဒေါ်လာ ၆၄၀ ရရှိခဲ့သည်။
သငျသညျ နိုင် ရက် ၃၀ အတွင်းနှင့်သင်၏ဝင်ငွေ 100X ထား Bundles of ရပြီး ငွေစာရင်း သို့ သင့်ရဲ့ ကမ်း အကောင့် ... အခါတိုင်း သငျသညျ လိုချင်!
မင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အခါ WTE platform, သင်သည်ရက်ပေါင်း 100 အတွင်း 30X သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအားဖြင့်သင့်ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်ချင်သည့်အခါတိုင်း windfall ငွေအစုအဝေးထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်!
ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကသင့်ကိုအမြတ်အစွန်း - ငွေရှာနိုင်မှုကိုပေးသည်။မော်တော်ယာဉ်” - ဒါကနောက်ဆုံးမှာသင့်ကို stratospheric ၀ င်ငွေအမြင့်ဆုံးသို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာအမြတ်အစွန်းကိုပုဂ္ဂလိကငွေကြေး၏စွမ်းအားကိုအသုံးချတတ်ရန်သင် (သင်ကဲ့သို့) လူများကဆိုးရွားလှသည့်နှစ်များအတွင်းရရှိခဲ့ကြသည်။ ယခုတွင်သင်သည်သင်၏မျှတသောဝေစုရရှိရန်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ - ဒါကပုဂ္ဂလိကငွေကြေးရဲ့အငြင်းပွားစရာအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ် - သင်ချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ဘဏ်စာရင်းထဲကိုငွေအမြောက်အမြားထည့်ထားလို့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်အိတ်ကပ်စာအုပ်ထဲကိုထည့်လိုက်ရင်ဒါကိုမင်းကြောက်နေလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏အလုပ်ရှင်အတွက်သင်လုပ်နိုင်သည်။ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်ယင်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုလေးခုကိုလုပ်နိုင်တယ်
ထုတ်ပေး 40 အကျိုးကျေးဇူးများကို
နဲ့ wte ပလက်ဖောင်း, အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
စက္ကန့် ၆၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောမည်သည့်ငွေပမာဏကိုမဆိုလေထုထဲမှလေထဲမှဖန်တီးပါ။
၃၀ အတွင်းဝင်ငွေကိုတစ်ကြိမ်နှိပ်ရုံဖြင့် ၁၀၀X ဖြင့်မြှောက်ပါ။
(ဒေါ်လာ ၁ သိန်းမှဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံမှ) အတိုးများသည့်ငွေကြေးပမာဏကိုသေချာစွာထားပါ။
အကန့်အသတ်မရှိခရက်ဒစ်လိုင်းရေးခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူနိုင်ခြင်း (ကြွေးမြီမဲ့)
ချေးငွေနှင့်ပေါင်နှံခြင်းကို ၀% ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသုံးအနှုန်းများကိုရယူပါ။
မည်သည့်အရင်းအနှီးမဆိုငွေကိုစက္ကန့် ၆၀ အတွင်းမြှုပ်နှံပါ။
အစစ်အမှန်ကမ္ဘာဘဏ္financialာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖန်တီးခြင်း၊ လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း
Visa နှင့် MasterCard ကတ်များကဲ့သို့ငွေပေးချေမှုကိရိယာများကိုထုတ်ပေးပါ။
အတိုးမဲ့ချေးငွေနှင့်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်ကျစရိတ်သုညဖြင့်ပေးရမည်။
လွယ်ကူစွာနှင့်အများဆုံးသီးသန့်တည်ရှိမှုဖြင့်ကမ္ဘာနှင့်အ ၀ ှမ်းရှိငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရွှေ့ပြောင်းပါ။
ပါတီများအကြားတန်ဖိုးကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရွှေ့ပါ။ ဤငွေပေးချေမှုများသည်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောအစပျိုးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ အလိုအလျောက်လည်ပတ်နိုင်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
၀ ယ်ယူသူများကို ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်အသစ်များအကြောင်းအသိပေးခြင်းသို့မဟုတ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှငွေသားများသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ဆုများဖလှယ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်။
၂၁။ ပစ္စည်းများကိုပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပစ္စည်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုငွေမ ၀ ယ်ပါ။
၂၃။ မည်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမဆိုငွေမရှိဘဲ ၀ ယ်ယူပါ။
၂၆။ သူတို့ ၀ ယ်ယူသည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအပေါ် ၉၀% အထိလျှော့စျေးရယူပါ။
၂၇။ အသုံးစရိတ်များကိုလျှော့ချခြင်းမပြုဘဲအသုံးစရိတ်များကို ၉၀% လျှော့ချပါ။
၂၉။ ၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကိုရန်ပုံငွေလုံးဝသုညမပေးပါ။
၃၅။ ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေနှင့်အမြတ်ငွေ ၁၀,၀၀၀% တိုးမြှင့်ပါ။
၂၄ နာရီအတွင်းသူတို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုရောင်းချပါ။
၂၇ နာရီအတွင်း ၁၂ လကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောစာရင်း၊ ပိုလျှံသောပမာဏ၊ နှေးနှေးသို့မဟုတ်ပိုလျှံသောထုတ်ကုန်များကိုစွန့်ပစ်ပါ။
၂၄ နာရီအတွင်း ၁၂ လရောင်းအားခန့်မှန်းချက်ကိုရယူပါ။
မကောင်းသောချေးငွေများကိုပြန်လည်ရယူပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းအခက်အခဲရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုချက်ချင်းငွေသားသို့မဟုတ်အရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပစ်ပါ။
ဤနေ့ရက်မှ စ၍ သင်၌ရှိသည်
သင်ကန့်သတ်မဲ့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် ယ်ယူခြင်း ပါဝါမှာ အလိုရှိ!
မင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အခါ WTE ငွေကြေးဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်အကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူမှုစွမ်းအား၊ ငွေချေးနိုင်မှုနှင့် ၂၄ ကာရက် solid-gold စီးပွားရေးအကြွေးကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း သငျသညျလိုအပျသလောက် အဖြစ်မကြာခဏသင်ကလိုအပ်သကဲ့သို့။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခရက်ဒစ်လိုင်း (သို့မဟုတ်စစ်ဆေးမှုများ) ကိုအကန့်အသတ်မရှိနှင့်မူးဝြေခင်းအဆင့်သို့သာရေးနိုင်သည်။
ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးသည်သင်လိုအပ်သော ၀ ယ်နိုင်စွမ်းအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်၊ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏စီးပွားရေး၊ သင်၏အလုပ်ရှင်သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကိုပိုင်ဆိုင်ရန်၊ ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ၀ ယ်ယူရန် (သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်) အခါတိုင်း၊ WTE သင်ဝယ်ယူလိုသမျှကို ၀ ယ်ရန်သင်၏ (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်လူ၏ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု) ကိုမဆို“ စျေးကွက်တန်ဖိုး” စာရင်းစျေးနှုန်းဖြင့်အနာဂတ်ဝယ်ယူရန်အတွက်“ ပုဂ္ဂလိကငွေကြေး” ကိုထုတ်ယူနိုင်မည့်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးထုတ်လုပ်ရန်ပလက်ဖောင်း။
ဒီနေ့မှ စ၍ သင်၌သင်လိုအပ်သည့် ၀ ယ်နိုင်သည့်စွမ်းအားအားလုံးရှိသည်။
ယ်ယူရန် မပါဘဲ ပိုက်ဆံ, သုံးစှဲ မပါဘဲ ငွေစာရင်း - Nအစဉ် ခြေးယူ or ပေးသည် စိတ်ဝင်စားမှု တဖန်တုံ!
သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုပြောင်းလဲရန်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုစတင်ဖန်တီးအသုံးပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်ငွေချေးယူမှုအပေါ်မှီခိုစရာမလိုတော့ပါ။ သင်သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်ယူရန်သင်၏ဘဏ်အကောင့်သည်ပြည့်နေရန်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်တော့ပါ။
သင်၏ဘဏ်စာရင်းတွင်ငွေထပ်မံထည့်ရန်မလိုတော့ပေ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အကန့်အသတ်မရှိသောပမာဏကိုရယူပါ။
သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေး ၀ ယ်ယူမှုများအားလုံးသည်အလိုအလျောက်“ အတည်ပြု” ထားပြီး (လုံးဝငြင်းဆိုခြင်း) နှင့်လုံးဝအတိုးနှုန်းကင်းမဲ့သောကြောင့်၊
မည်သူမျှသင်၏ဘဏ္statementာရေးရှင်းတမ်းကိုကြည့်ရှုရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်သို့မဟုတ်သင့်အားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပေါင်နှံရန်သို့မဟုတ်သင်လုပ်ကိုင်နေသည့်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကိုကိုယ်တိုင်အာမခံရန်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်သင်ငွေပေးနိုင်စွမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားမည်သူကမှမေးမြန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်သင်၏ဝယ်ယူမှုအဆင့်အတန်းကိုဘယ်သောအခါမျှမြှုပ်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ရန်လိုမှု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ စွမ်းအင်နှင့်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်သာယာဝပြောရန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ကောင်းကင်ကအမှန်တကယ်ကန့်သတ်ချက်ပါ။
သင်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာမြှုပ်နှံပြီးပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကို အသုံးပြု၍ ကြွေးများကိုဆပ်နိုင်သည် wte ပလက်ဖောင်း!
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဖြစ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကဒေါ်လာ ၂၄၁ သန်းနှင့်ဒေါ်လာ ၂၄၁ သန်းကြွေးတင်ရန်ဤပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
နိုင်ငံစုံစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်းကဒီပလက်ဖောင်းကိုဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံနဲ့ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံကိုပြန်ဆပ်ဖို့သုံးခဲ့တယ်။
ရေနံမြေ ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒီပလက်ဖောင်းကိုသုံးပြီးဒေါ်လာ ၃.၁၅ ဘီလီယံကိုသိမ်းဆည်းပြီးဒေါ်လာ ၃.၁၅ ဘီလီယံအကြွေးကိုဆပ်ခဲ့တယ်။
ဇီဝဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်ဤပလက်ဖောင်းကိုဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံမြှင့် တင်၍ ဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံအကြွေးကိုဆပ်ခဲ့သည်။
စင်ပေါ်ယူနစ်များနှင့်စနစ်များကို ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ကဒီပလက်ဖောင်းကိုဒေါ်လာ ၄၈၅ သန်းရရှိရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက၎င်းပလက်ဖောင်းကိုဒေါ်လာ ၉၈ သန်းရရှိရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
စက်မှုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ကဒီပလက်ဖောင်းကိုသုံးပြီးဒေါ်လာ ၂၃ သန်းနဲ့အကြွေး ၂၃ သန်းပေးခဲ့တယ်။
သံမဏိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်ဤပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ ဒေါ်လာ ၁၄.၈ သန်းနှင့်ကြွေးမြီဒေါ်လာ ၁၄.၈ သန်းကိုပေးခဲ့သည်။
ငွေသားချို့တဲ့သည့်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်၎င်းလည်ပတ်မှုကိုတည်ငြိမ်စေရန်ဒေါ်လာ ၂.၂ ဘီလီယံငွေသားပြုတ်ရည်ကိုရရန်ဤပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ၂၀၀၀၀-BPD ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသည့်ရေနံစိမ်းအတွက်မော်ဂျူလာရေနံချက်စက်ရုံကိုဝယ်ယူရန်အရင်းအနှီးကိုမြှင့်တင်ရန်ဤပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Brian သည်ယခင်စူပါမားကတ် ၀ န်ထမ်းအနည်းဆုံးလုပ်အားခကိုကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းဖန်တီးခဲ့ပြီးဒီပလက်ဖောင်းကို သုံး၍ ၇၂ နာရီအတွင်းအမြတ်ငွေဒေါ်လာ ၆၀၀၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်။
Carnival Cruise Lines၊ ဖလော်ရီဒါအခြေစိုက် Cruise Line သည်ယခုအခါကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံး Cruise Line ဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတစ်စင်းနှင့်လည်ပတ်နိုင်သည့်အရင်းအနှီးမလုံလောက်ခြင်းတို့ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဆယ်လတာကာလအတွင်းမြို့ကြီး ၁၀၀ တွင်ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်သတင်းစာကြော်ငြာများအတွက်အချည်းနှီးသောအခန်းများကိုကုန်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်္ဘောရွက်လွှင့်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဗလာကျင်းမည့်ကုန်ကျစရိတ်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခရီးသည်များသည်ဘား၊ လောင်းကစားရုံ၊ လက်ဆောင်အရောင်းဆိုင်နှင့်ကမ်းခြေလေ့လာရေးခရီးများတွင်ငွေများစွာစုဆောင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အချည်းနှီးသောအခန်းကိုဖြည့်ရန်ခရုဇ်လိုင်းအတွက်အသားတင်ကုန်ကျစရိတ်သည်စာသားအရသုညထက်နည်းသည်။ ကွဲပြားခြားနားဖော်ပြထားသည်, သူတို့သည်ဗလာထွက်သွားမယ့်အစားသိမ်းပိုက်ခံရကုန်သွယ်အခန်းကနေကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းကိုဖန်ဆင်း။
ဒီမှာခရုဇ်လိုင်းအတွက်ငွေပမာဏ သူတို့သည်ဤနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ဘောကြီးဖြစ်လာရန်နှင့်မြို့ကြီး ၁၀၀ တွင် ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာငွေသားတစ်ပြားမှမကုန်ဘဲအမြဲတမ်းကြော်ငြာခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်သောရောင်းအားပမာဏ၏ရှေးရိုးစွဲခန့်မှန်းချက်မှာဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။ Cruise Line ပိုင်ရှင်သည်ယခုအခါဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Forbes ၏အချမ်းသာဆုံးစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဒါ့အပြင်အသက် ၃၀ အရွယ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုသုံးပြီးပြင်းထန်တဲ့ကြော်ငြာတွေကစတင်ခဲ့တယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းဘဏ်များသို့အကြွေးဒေါ်လာ ၇.၂ ဘီလီယံကိုလျှော်ပေးခဲ့သည် WTE ပလက်ဖောင်း။
ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ရက် ၃၀ အတွင်းဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိအဆောက်အအုံသစ်များကို ၀ ယ်ယူခဲ့သည် WTE ပလက်ဖောင်း။
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကုမ္ပဏီမှပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် ၂၃ ခုအားအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၇၅ သန်းတန်ဖိုးရှိပုဂ္ဂလိကငွေကြေးဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည် WTE ပလက်ဖောင်း။
စက်မှုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူသည်ဒေါ်လာ ၅၇၈ သန်းတန်ဖိုးရှိစက်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ WTE ပလက်ဖောင်း။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီသည်ဒေါ်လာ ၂၃၅ သန်းတန်တန်ဖိုးရှိသောမက်သနောစက်ရုံကိုပုဂ္ဂလိကငွေကြေးဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည် WTE ပလက်ဖောင်း။
ရေနံကုမ္ပဏီတခုသည်မကြာသေးမီကပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကို အသုံးပြု၍ ၂၀,၀၀၀ BPD ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသောရေနံစိမ်းအတွက်မော်ဂျူးရေနံချက်စက်ရုံကိုဝယ်ယူခဲ့သည် WTE ပလက်ဖောင်း။
Giovanni သည် ၁၂၃ နှစ်အရွယ်ဒေါ်လာ ၂၅၀ သန်းလည်ပတ်ငွေကြေးကုမ္ပဏီကို ၀ န်ထမ်း ၇၆၈ ဦး ဖြင့်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူခဲ့သည် WTE ပလက်ဖောင်း။
သံမဏိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်စက်ရုံ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဒေါ်လာ ၇၅ သန်းဖြင့်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးဖြင့် အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည် WTE ပလက်ဖောင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့အားပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကို အသုံးပြု၍ ပြီးမြောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်ခဲ့သည့်မယုံနိုင်စရာအရာအချို့ရှိပါသည် WTE ပလက်ဖောင်း:
ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်၎င်းတို့အတွက်ကုန်ကျသောဒေါ်လာသန်းတစ်ထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိအိမ်ခြံမြေများ - လုံးဝဘာမျှမရှိသည်!
ကုမ္ပဏီမှကားများ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ရှုခင်းများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများနှင့်အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာသုံးပစ္စည်းများ၊ ဟိုတယ်ခန်းညများနှင့်လေကြောင်းလိုင်းများအတွက်ဒေါ်လာ ၈၅၀ မီလျံတန်ကြေးရှိသည်။
အခြားကြော်ငြာများမှာရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများ၊ ပုံနှိပ်ကြော်ငြာများ၊ ပြင်ပကြော်ငြာများ၊ အင်တာနက်ကြော်ငြာများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အတိုင်ပင်ခံများ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ဆက်ဆံရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ စည်းဝေးကြီးအဆောက်အအုံများ၊ အပျော်စီးသင်္ဘောများ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးအမြတ်စင်တာမှဒေါ်လာ ၇၅၀,၀၀၀,၀၀၀ - လေးပုံတစ်ပုံအမြတ်ငွေကိုအတိုးရခဲ့သည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုအများကြီးအများကြီးပြောနိုင်နှင့်သင်၏မျက်စိခုန်နိုင် ... ဒါပေမယ့်သူကစာမျက်နှာ 1000 ကိုဖြည့်ပါလိမ့်မယ် ... ငါသင်စိတ်ကူးရသေချာပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးဖန်တီး & အသုံးပြုပါ
ဝေါ့ဒစ္စနေးကုမ္ပဏီသည်ဘီလီယံနှင့်ချီသောဒေါ်လာဘီလျံများတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ရောင်းအားတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ၀ ယ်ယူမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ကြွေးမြီများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်သူတို့၏ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချခြင်းအတွက်သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းချက်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
၁၉၈၇ တွင်ဝေါ့ဒစ္စနေးကုမ္ပဏီသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုဒစ္စနေးဒေါ်လာ (ဒေါ်လာ) ဘီလီယံအမြတ်အစွန်းရအောင်ဖန်တီးသည်၊ ၎င်းတို့သည် ၀ င်ငွေဘီလီယံနှင့်ချီ။ ထုတ်လုပ်သည်၊ ဝယ်ယူမှုများ၊ သို့သော်ဒစ္စနေးဒေါ်လာကိုဖန်တီးထားပြီးဖြစ်သောဒစ္စနေးကမ္ဘာ့၊ ဒစ္စနေးနှင့်ဒစ္စနေးစတိုးများတွင်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ဘီလျံနာများ၊ Fortune ၅၀၀ ကုမ္ပဏီများ၊ ဘဏ်များ၊ တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီများ၊ Las Vegas လောင်းကစားရုံများနှင့် The Walt Disney ကုမ္ပဏီတို့သည်စီးပွားရေးအရင်းအနှီးကိုမြှင့်တင်လျက်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးများဖြင့်လေထုထဲမှပိုက်ဆံများကို ဖန်တီး၍ ဝင်ငွေဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာရရှိကြသည်။ သူတို့ကအရင်းအနှီးကိုမြှင့်တင်ပြီးအမြတ်အစွန်းများတဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံအခွင့်အလမ်းတွေရဖို့အတွက်ငွေတွေကိုဖန်တီးတယ်။ မင်းလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာအခုထိဘယ်တော့မှရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
AMAZON သည်ဘီလီယံနှင့်ချီသောဒေါ်လာဘီလီယံများစွာကိုမြှင့်တင်ရန်၊ ရောင်းအားတိုးမြှင့်ရေးနှင့်သူတို့၏ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်သီးသန့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုဖန်တီးပြီးအသုံးပြုခဲ့သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအမေဇုန်သည်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောအပို ၀ င်ငွေများရရှိရန်၊ ၀ ယ်ယူမှုလုပ်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ငွေသားအသုံးစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်အတွက်လက်ဆောင်ကဒ်များဖြင့်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အမေဇုံသည်ဖောက်သည်များ၏ပုဂ္ဂလိကအွန်လိုင်းစျေးဝယ်မှုအတွက် virtual ငွေကြေးစတင်ခဲ့သည်။ Amazon ၏ virtual ငွေကြေးသည်သုံးစွဲသူများကို“ သူတို့၏ငွေများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲ” စေလိမ့်မည်။ Amazon သည်သုံးစွဲသူများအတွက် virtual ငွေကြေးအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာမီကြေငြာနိုင်သည်။
Amazon လက်ဆောင်ကဒ်များကိုမည်သူ့ကိုမဆိုသင်စုဆောင်း၊ လက်ခံ၊ ပေးခဲ့ရင် Amazon ရဲ့သီးသန့်ငွေကြေးကိုသင်အသုံးပြုခဲ့တယ်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာသင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုသင်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းသည်သင့်အားတစ်ခါမျှမဖြစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ။ ငွေချေးရန်ပုဂ္ဂလိကလက်ကျန် Facebook ကို Facebook တွင်အသုံးပြုသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ကစားသည့်ဂိမ်းများမှရောင်းရငွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် 'ချေးငွေ' ဟုခေါ်သည့်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းများမှကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် 'ခရက်ဒစ်' ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Facebook ခရက်ဒစ်များကိုအွန်လိုင်းမှဝယ်ယူရန်ခရက်ဒစ်ကဒ်၊ PayPal အကောင့်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်အခြားငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များနေရာများတွင်အော့ဖ်လိုင်းရှိသည်။ ချေးငွေများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိမတက်မီတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Facebook သည် 'Credits' ၏ငွေကြေးမှနောက်ထပ်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာအမြတ်ငွေရရှိခဲ့သည်။
2019 ခုနှစ်တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖြန့်ချိမည့် Libra (Diem ဟုအမည်ပြောင်း) ဟုခေါ်သည့် ပိုမို၍ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုကြေငြာခဲ့သည်။
ယူအက်စ်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရုံး (USPTO) က ၂၀၂၀ တွင်အစီရင်ခံစာတစ်ခုအနေဖြင့်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် Visa သည် blockchain နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဗဟိုကွန်ပျူတာတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖန်တီးရန်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Visa ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဲလ်ဖရက်ကယ်လီကဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို JP Morgan TMC Virtual Conference တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းပညာအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ “ ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးဟာတကယ့်တကယ်ပဲ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားကကယ်လီဖိုးနီးယားက“ တကယ်လို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဟာငွေပေးချေမှုစနစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အပြင်ငွေပေးချေမှုစနစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Walmart မှထုတ်လွှင့်သောဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာကိုမြှင့်တင်ရန်၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့် ၄ င်းတို့၏ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်သီးသန့်လက်ရှိအသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုသည်။
လက်ဆောင်လက်မှတ်များ၊ အရောင်းအ ၀ ယ်တံဆိပ်များ၊ လျှော့စျေးကူပွန်များ၊ ဖုန်းကဒ်များနှင့် scrips များစသည်တို့ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။ ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောအပို ၀ င်ငွေများရရှိသည်၊
Walmart လက်ဆောင်ကဒ်များ၊ လက်ဆောင်လက်မှတ်များ၊ တံဆိပ်ခေါင်းများ၊ အထူးလျှော့စျေးကူပွန်များ၊ ဖုန်းကဒ်များသို့မဟုတ်မည်သူမဆိုကိုဖတ်ရန်အတွက်သင်က Walmart ၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာ Walmart ၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးဖြစ်ပြီးသင်၏ငွေကြေးကိုလည်းသင်ထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်းသင့်အားတစ်ခါမျှမဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Citigroup IS သည်ကမ္ဘာ့အစိုးရများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတည်ဆောက်ရန်ကူညီနေသည်
Citigroup ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Michael Corbat ကသူ၏ဘဏ်သည်ယခုအခါ၎င်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုလုပ်ဆောင်နေပြီးဗဟိုဘဏ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး (CBDC) ဟုလည်းသိကြသောအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကိုတီထွင်ရာတွင်အစိုးရများအား“ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကူညီပေးနေသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သောကြာနေ့ Bloomberg အစီအစဉ်တွင် David Rubenstein နှင့်စကားပြောသောအခါ Corbat က CBDCs များသည်အနာဂတ်တွင်ငွေ၏အနာဂတ်အတွက်မလွှဲမရှောင်သာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံစုံဘဏ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော Citigroup သည်ထိုအနာဂတ်ကိုကူညီရန်ကူညီနေသည်။ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ၏ဖန်တီးမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအစိုးရများနှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသည်။
LARGE ကော်ပိုရေးရှင်းများ အသုံးပြုမှု ပုဂ္ဂလိက CURRENCY AS A စီးပွားရေး EDGE / စောင်ရန်းကို!
ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်ကော်ပိုရေးရှင်းများသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်တွင်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော“ အစွန်းရောက်ရန်ပုံငွေ” အနေဖြင့်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုအသုံးချနိုင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာဟိုတယ်ကွင်းဆက်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကလေကြောင်းလိုင်းပါ။ တစ်ခုကရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်တစ်ခုပါ။ နောက်ထပ်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကသံမဏိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကရေကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာအီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအခြားကော်ပိုရေးရှင်းများထောင်နှင့်ချီ။ ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးသည်သူတို့၏အောက်ခြေလိုင်းများသို့ပေါင်းထည့်လိုက်သောကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းပမာဏကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်ပြီဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနှင့်ချီ။ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Guy Little ကများအတွက်ကစားကွင်းအဆင့်အထိရန်
…ပြီးတော့ဒါဟာ ၁၀၀% တရားဝင်!
ဂျနီဖာသည်ပျင်းစရာကောင်းသည့်ကော်ပိုရိတ်အလုပ်မှတစ်လလျှင်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၃ မီလျံသို့သွားခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဂျက်စီကာ - ၅ နှစ်အရွယ်မိန်းမနှင့်မိခင်တစ်လသည်ကော်မရှင်၌ဒေါ်လာ ၇.၅ သန်းရရှိခဲ့သည်။
Baldwin သည်သူ၏စီးပွားရေးစတင်တည်ထောင်ပြီးနောက်ရှစ်ရက်အကြာတွင်အပေးအယူအတွက်ဒေါ်လာ ၉၅၀ သန်းနှင့်ကော်မရှင်တွင်ဒေါ်လာ ၉၅၀,၀၀၀ ရှိသည်။
Boris သည်ဒေါ်လာသန်း ၆၀၀ ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွင်မကြာသေးမီကမှ ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၁၂ သန်းရရှိရန်ကူညီခဲ့သည်။
Randy သည်တစ်လလျှင်ပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၁၇ သန်းရရှိသည်။
Damian သည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ပြီးနောက်ခြောက်ပတ်အတွင်းဒေါ်လာ ၉.၅ သန်းရရှိခဲ့သည်။
ကက်သရင်းသည်သူမ၏ခရက်ဒစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းရရှိသည်။
Robert သည်သူ၏ခရက်ဒစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၂.၄ သန်းရရှိသည်။
ဂျက်ဖရီယခုသူ၏အကြွေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတဆင့်တစ်လလျှင် $ 8.5 သန်းစေသည်။
ဂျက်ဆင်သည်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ နီးပါးရရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုခုနစ်လမျှသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Brian သည်ဤလုပ်ငန်းကိုဘဏ္businessာရေးလုပ်ငန်း၌အတွေ့အကြုံမရှိဘဲစတင်ခဲ့သည်။ အခုသူဟာကော်မရှင်တွေမှာတစ်ပတ်ကိုဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်ရတယ်။
တစ်လမပြည့်မီတွင်ဂျွန်ဆင်သည်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ နှင့်စာချုပ်များချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးကော်မရှင်များတွင်ဒေါ်လာ ၂.၅ သန်းရရှိခဲ့သည်။
၁၃။ Peter နှင့် Janet တို့သည်အပေးအယူ ၅၀ မှဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံနှင့်အပြီးသတ်ပြီးသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာဒေါ်လာ ၂၀ သန်းရရှိခဲ့သည်။
၁၄။ Theodore Powell သည်ဒေါ်လာ ၇၅၀ သန်းနှင့်အပေးအယူသဘောတူညီမှုရှိပြီးသူ၏စီးပွားရေးကိုစတင်တည်ထောင်ပြီးနောက်ရှစ်ရက်အကြာတွင်ကော်မရှင်ဒေါ်လာ ၇၅၀,၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်။
၁၅။ Luis Allen သည်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ တန်အရောင်းအ ၀ ယ်ရှိပြီးတစ်လမပြည့်မီကော်မရှင်များတွင်ဒေါ်လာ ၃.၅ သန်းရရှိခဲ့သည်။
16. Merlyn Moore ကိုကျော်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ $ 70.5 သန်း ဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကနေလစုံတွဲတစ်တွဲအတွင်းမှာ။
၁၇။ Nigel Smith သည်ဒေါ်လာ ၆၀၀ မီလျံသောငွေကြေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရှိပြီးသူအားဒေါ်လာ ၁၂ သန်းလျော်ကြေးငွေပေးခဲ့သည်။
၁၈။ အီရန်ရော့စ်သည်ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်သည့်တစ်လအတွင်းဒေါ်လာ ၁၅ သန်းပေးခဲ့သည်။
၁၉။ Ryleigh Morgan သည်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှလစဉ်ဒေါ်လာ ၁၂.၅ သန်းသို့သွားခဲ့သည်။
၂၀။ Arlie Lopez သည်သူမ၏ခရက်ဒစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ဒေါ်လာ ၁၇ မီလီယံကိုတသမတ်တည်းရရှိသည်။
၂၁။ Ariel Parker သည်သူ၏ခရက်ဒစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁၂.၄ သန်းတသမတ်တည်းရရှိသည်။
၂၂ Sean Anderson သည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၂၅၇၅၀၀၀ ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
၂၃။ Danica Walker သည်သူ၏အကြွေးစီးပွားရေးအတွက်နည်းလမ်းများဖြင့်ဒေါ်လာ ၈.၅ သန်းတသမတ်တည်းရရှိသည်။
၂၄။ Heinrich Lee သည်တစ်လအတွင်းဒေါ်လာ ၁၅ သန်းဖြင့်ဤစီးပွားရေးကိုစတင်ခဲ့သည်။
သင်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုမအောင်မြင်လျှင်၊ အတိတ်ကာလကအခြားအခွင့်အလမ်းများ၊ ပလက်ဖောင်းများ၊ စျေးကွက်များ၊ စနစ်များ၊ ဖြေရှင်းမှုများ၊ မဟာဗျူဟာများသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ရလဒ်များကိုရရှိခဲ့သည်။
အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားအခွင့်အလမ်းများ၊ ပလက်ဖောင်းများ၊ စျေးကွက်များ၊ စနစ်များ၊ အဖြေများ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့်အစီအစဉ်များသည်အစိုးရ၏ (သို့) အခြားလူများ၏ငွေကြေးပေါ်တွင်အခြေပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့ဖန်တီးသူဘယ်နှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုဖန်တီးအသုံးပြု? မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးနဲ့အတူဖန်တီးပြီးလည်ပတ်နိုင်အောင်သူတို့ထဲကဘယ်နှစ်ယောက်ခွင့်ပြုခဲ့သလဲ။ မရှိပါ
အခြားအခွင့်အလမ်းများ၊ ပလက်ဖောင်းများ၊ စျေးကွက်များ၊ စနစ်များ၊ ဖြေရှင်းချက်များ၊ မဟာဗျူဟာများသို့မဟုတ်ယခင်ကသင်ကြိုးစားခဲ့သည့်အစီအစဉ်များတွင်အသုံးပြုသောငွေကြေးများကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သင်ရလဒ်ကိုအာမမခံနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်စိတ်ပျက်စရာရလဒ်များကိုရရှိခဲ့သည်။
အောင်မြင်မှု WTE သင်မြင်တော့မည့်ပလက်ဖောင်းသည်လုံးဝကွဲပြားသည်။
၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုဖန်တီးခြင်း၊ ငွေရှာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးတွင်သင်၏ ၀ င်ငွေရလဒ်များကိုအာမခံရန်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ရက် ၃၀ အတွင်း 100X ၀ င်ငွေရရှိရန်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း။
လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းသည်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်၏အဆိုးဆုံးအိပ်မက်ဆိုးဖြစ်သည့်အတွက်သင်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုတရားဝင်လုပ်နိုင်သည်ဟုမသိသောကြောင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များကဆုတောင်းကြသည်။
Fortune ၅၀၀ ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးများကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်စိတ် ၀ င်စားကြသည်။ သူတို့သည်ငွေများလွန်းနေပြီးပုဂ္ဂလိကငွေကြေးများဖြင့်မမျှတသောယှဉ်ပြိုင်မှုအားသာချက်ကိုရရှိနေကြသည်။
ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုဖန်တီးအသုံးပြုခြင်းသည်ကလေးငယ်အားကစားကွင်းအဆင့်ကိုညီမျှစေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀% တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုမှုသည်စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်ပြီးငွေပေးငွေယူကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထား သ၍ ၎င်းသည် ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့်တရားဝင်ပြီးအခွန်ကောက်ခံနိုင်သည်။ (အသေးစိတ်အတွက်သင်၏စာရင်းကိုင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ )
ထိုအဘယ်မှာရှိရဲ့ Wte ပလက်ဖောင်းလာ ...
ဘာလဲ wte ပလက်ဖောင်း?
အဆိုပါ wte platform သည်သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးဖန်တီးမှုမှတစ်ဆင့်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းသင်၏ဝင်ငွေကို ၁၀၀x တိုးပွားစေမည့်တစ်ခုတည်းသော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ရည်ရွယ်ချက်စုံရှိသော platform တစ်ခုဖြစ်ပြီးခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်စက္ကန့် ၆၀ အတွင်းမည်သည့်ငွေပမာဏကိုမဆိုသင်ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် WTE ခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်စက္ကန့် ၆၀ အတွင်းဒေါ်လာ ၁၀ သန်း၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလီယံ၊ ၁ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံဒေါ်လာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအရာများကိုဖန်တီးရန်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
၎င်းကိုဘဏ်များ၊ ဘဏ္Financialာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ E-money ထုတ်ပေးသူများ၊ ဆန်းသစ်သောငွေကြေးစနစ်များ၊ E-wallets၊ အွန်လိုင်းငွေပေးချေစနစ်များ၊ Virtual ငွေကြေးပံ့ပိုးသူများ၊ ကော်ပိုရိတ်ကုန်သည်များ၊ ။
မည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်တယ် WTE ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ခြင်းနှင့်အတူပလက်ဖောင်း!
ကနေတဆင့်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးဖန်တီးခြင်း WTE ပလက်ဖောင်းသည်အီးမေးလ်ပို့ရန်ကွန်ပျူတာ / ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ အကယ်၍ သင်ကွန်ပျူတာမောက်စ်ကို နှိပ်၍ အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ရန်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုထိတွေ့ပါကစက္ကန့် ၆၀ အတွင်းမည်သည့်ငွေကြေးပမာဏကိုမဆိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂလိကငွေများဖန်တီးခြင်းသည်“ နှိပ်ပြီးနှိပ်” ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အောက်ပါဗွီဒီယိုသရုပ်ပြကိုကြည့်ပါ - စက္ကန့် ၆၀ အတွင်းဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဖန်တီးသည်။
ထဲမှာ wte ပလက်ဖောင်း
$ 1 ထရီလီယံ WTE ငွေကြေးဖန်တီးခြင်းအတွက်ပလက်ဖောင်း
အဆိုပါ WTE ပလက်ဖောင်းသည်မည်သည့်ငွေပမာဏကိုမဆို နှိပ်၍ မည်သည့်ငွေပမာဏကိုမဆိုဖန်တီးရန်၊ ထုတ်ပေးရန်နှင့်စီမံရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ဒေါ်လာ ၁ သန်း၊ ၁၀၀ မီလီယံ၊ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလျံရှိမရှိ၊ အရေးမကြီးပါ။
အဆိုပါ WTE ပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ကျောရိုးငွေကြေးကိုလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သောနည်းပညာကျောရိုးနှင့် back-office administrator platform ဖြစ်သည်။
100% ထုတ်ပေး: သင့်ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုပလက်ဖောင်းအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည်သင်၏ပလက်ဖောင်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုအလိုအလျောက်မပေးနိုင်ပါ။ သင်ညွှန်ပြရန်သာလိုသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုစတင်ရန်သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးသည်တည်ဆောက်ထားသည်။ ပြီးတာနဲ့သင်၏ WTE ပလက်ဖောင်းကို set up, သင်သည်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ screen ပေါ်မှာ mouse ကိုအနည်းငယ်ကလစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထိတွေ့နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်။
ငွေကြေးအမြောက်အများ အဆိုပါ WTE ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်ငွေကြေးနှင့်မဆိုအလုပ်လုပ်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပလက်ဖောင်းကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
ဘာသာစကားမျိုးစုံ အဆိုပါ WTE ပလက်ဖောင်းကိုမည်သည့်ဘာသာစကားမှဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက CURRENCY စျေးကွက်
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေး (ပိုက်ဆံ) ကိုဖန်တီးပြီးနောက်နောက်တစ်ဆင့်မှာ၎င်းကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်ငွေသားအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးစျေးကွက်ဝင်သောနေရာဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးစျေးကွက်သည်အသင်း ၀ င်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသင်း ၀ င်များသည်အသင်း ၀ င်များမှပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုငွေကြေးမပါဘဲ ၀ ယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းရန်သဘောတူသော်လည်းသင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုလဲလှယ်သူအဖြစ်အသုံးပြုရန်သဘောတူခဲ့သည်။
WTE သင့်ကိုပုဂ္ဂလိကငွေကြေးစျေးကွက်တစ်ခုဖွင့်ပေးပြီးသင်၏နှင့်ပေါင်းစပ်ပေးလိမ့်မည် WTE ပလက်ဖောင်း။
သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးဈေးကွက်မှတဆင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကို အသုံးပြု၍ ငွေမပေးဘဲသင်လိုချင်သည့်အရာမှန်သမျှကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစျေးကွက်ရှိငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်းဖြင့်ငွေသားပြောင်းနိုင်သည်။
သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးစျေးကွက်သည် Amazon သို့မဟုတ် eBay ကဲ့သို့သင်အကြိုက်ဆုံး e-commerce ဆိုဒ်များနှင့်ဆင်တူသည်။ အရောင်းအမိန့်များ၊ ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ ငွေပေးချေမှုမှတ်တမ်း၊ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အခြားပုဂ္ဂလိကငွေကြေးစျေးကွက်အတွက်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်စေသည့်အခြားအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
ပုဂ္ဂလိက CURRENCY ကိုငွေအသွင်ပြောင်းရန်ကိရိယာတန်ဆာပလာ!
ဤကိရိယာသည်သင့်အားငွေကြေးဖန်တီးမှုစနစ်အပြင် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများမှငွေကြေးများကိုရှာဖွေရန်နှင့်သူတို့၏ငွေကြေးများကိုငွေသားအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသောရှုပ်ထွေးသောကိရိယာများ၊ ကွန်ယက်များနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပေးသည်။ သင်တို့သည်လည်းသူတို့ငွေကြေးဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည့်ငွေကြေးပုံနှိပ်ကုမ္ပဏီများစာရင်းတစ်ခုလည်းရလိမ့်မည်။
တစ်နှစ်အတွက်ဒေါ်လာ ၂၀ မီလီယံအကန့်အသတ်မရှိတိုင်ပင်ဆွေးနွေး!
သင်တစ်နှစ်အတွင်းအကန့်အသတ်မဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုရရှိမည်ဖြစ်သည် WTE's အတိုင်ပင်ခံ။ WTEအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များသည် ၃၈ နှစ်ကြာပုဂ္ဂလိကငွေကြေးအတွေ့အကြုံနှင့်အမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးအဆက်အသွယ်များ၏သီးသန့်ကွန်ယက်ရှိသည်။ Brainstorm, network, joint ventures ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးတွင်အရောင်တောက်ခြင်းမှသင်ယူခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်သင်၏တစ် ဦး ချင်းအခြေအနေနှင့်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည် - ပြsolveနာများကိုဖြေရှင်းပေး၊
ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးထုတ်ပေးရေးတွင်အသုံးပြုသောနည်းဗျူဟာများနှင့်နည်းစနစ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်မေးသောမေးခွန်းများအတွက်အဖြေကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန်ကြီးမားသော (သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောသို့မဟုတ်စျေးကြီးသော) ကိစ္စရပ်များမှအကူအညီ ရယူ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအဓိကပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကုမ္ပဏီအမှုဆောင်များနှင့်မိတ်ဆက်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတံဆိပ်တပ်။ သင်၏ဒိုမိန်းအမည်မှတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်သောကမ္ဘာ့အဆင့်မီစီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအားကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်အခြားလူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအတိုးမဲ့ချေးငွေနှင့်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအနေဖြင့်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
“ Done for you” စီးပွားရေးအဖွဲ့
ဒီစင်မြင့်ပေါ်ရှိအလုပ်၏ ၁၀၀% သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
သင်၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ၁၀၀% သောအလုပ်များကိုလုပ်သောစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိလိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင်၏ပလက်ဖောင်းကို ၂၄/၇/၃၆၅ တွင်စီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင်၏ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ငွေထည့်ခြင်းဖြင့်သင်ဖုန်းဖြင့်မည်သူမဆိုပြောဆိုရန်မလိုပါ။
ထို့ကြောင့်ဤပလက်ဖောင်းကိုအလုပ်လုပ်ရန်သင်၏ဗဟုသုတ၊ ယခင်အတွေ့အကြုံ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အပိုဆောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမနှစ်အတွက်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များကိုအပြည့်အဝထောက်ခံမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ။
ဤအဖွဲ့သည်သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးလည်ပတ်မှုတစ်ခုလုံးကိုစီမံပြီးသင်၏ platform ကို 24/7/365 ကိုထောက်ပံ့လိမ့်မည်။
သင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်တပ်ဆင်ရန်၊ စတင်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သော 100% အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည် WTE သင်၏ကိုယ်စားပလက်ဖောင်း။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ဒီအသင်းအတွက်အခကြေးငွေမပေးနိုင်တာပါပဲ။
သင့်အနေဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပါ ၀ င်သည့်သင်၏အက်မင်ထိန်းချုပ်ခလုပ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ သင့်လုပ်ငန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို admin dashboard သို့သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို Real-time 24/7 တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Back-office အင်ဂျင်သည်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်အဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်တိုင်းကိုအကျဉ်းချုပ် မှစ၍ အသေးစိတ်အထိ၊ ပြည့်စုံသောဘဏ္andာရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပေါ်အခြေခံသည့် dashboards နှင့်သင်၏စီးပွားရေးတစ်ခုလုံး၏အချိန်နှင့်တပြေးညီအစီရင်ခံစာများကိုအချိန်နှင့်အမျှမြင်တွေ့နိုင်သည်။
သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးပလက်ဖောင်းအတွက်သင့်အားကုမ္ပဏီဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အထုပ်တစ်ခုပေးမည်။ ဤကုမ္ပဏီ၏အမှတ်အသားအထုပ်သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏ရှေ့မှောက်၌သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့တွင်သင်၏စီးပွားရေးအချက်အလက်များပါဝင်သည့်စီးပွားရေးကတ်ပြားများ၊ သင်နှင့်တွေ့ဆုံသူမည်သူမဆိုနှင့်သင်၏ချက်ချင်းတည်ရှိမှုကိုပြသမည့်အထုပ်တစ်ခုဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါမည်။
ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုလည်ပတ်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အသိပညာ၊ ကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များ
အောင်မြင်သောပုဂ္ဂလိကငွေကြေးစင်မြင့်တစ်ခုစတင်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းကဏ္ aspect တိုင်းကိုပြည့်စုံသောသင်ကြားမှုအစီအစဉ်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်“ ငွေကြေး” ကိုမည်သို့တရားဝင်တရား ၀ င်ထုတ်။ မည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်နည်း။
ရက် ၃၀ အတွင်းသင့်ရဲ့ ၀ င်ငွေကို ၁၀၀x တိုးမြှင့်ဖို့အတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
၂၄ နာရီအတွင်းစီးပွားရေးအရင်းအနှီးဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံမှ ၁၀၀ ဘီလီယံအထိမြှင့်တင်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။
သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုငွေသို့မည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း။ သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုငွေသို့ပြောင်းရန်နည်းလမ်း ၃၁ ခု။
ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတန်ဖိုးဒေါ်လာသန်း ၄၅၀ ရရှိရန်သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုမည်သို့မည်ပုံအသုံးပြုရမည်၊ ခရီးသွားခြင်း၊ အရင်းအနှီးနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဇိမ်ခံကားများ၊
၀ ယ်လိုအား၊ အကန့်အသတ်မဲ့ ၀ ယ်ယူနိုင်မှု၊ ငွေချေးနိုင်မှုနှင့် ၂၄ ကာရက် solid-gold စီးပွားရေးအကြွေးကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်။
ပုဂ္ဂလိကငွေကြေး၏အခွန်ဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များကိုကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် IRS နှင့်မည်သို့တည့်တည့်နေရမည်နည်း။
အဆိုပါ WTE ပလက်ဖောင်းကုန်ကျစရိတ်?
... အကယ်၍ သင်ကသုံးမယ်ဆိုရင် - ဒါကမင်းကိုလိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက်အများကြီးပိုပိုအောင်လုပ်ပေးမှာပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း WTE သင်၏ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းအခမဲ့စွန့်စားမှုကာလအတွင်းလင်းနို့သည်ချက်ချင်းလက်ငင်းငွေပေးချေခြင်းမရှိလျှင်ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားအကုန်အကျသက်သာလိမ့်မည်။
အလေးအနက်ထား! တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ WTE ပလက်ဖောင်းသည်သင်စိတ်ထဲမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်။ သင်တွေးမိသည်ထက်ဝင်ငွေဖြစ်နိုင်ခြေခေါင်းလောင်းများကိုပိုမိုမြည်လာလိမ့်မည်။
သင်၏မေးခွန်းကို ပိုမို၍ တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုရန်၊ သင်က“ မောင်းနှင်အား” ကိုရက် ၃၀ ကြာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာစစ်ဆေးနိုင်သည် WTE အဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်များ။
၌သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု WTE ပလက်ဖောင်းသည် ၁၀၀% ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရက်ပေါင်း ၉၀ ဖြင့်အကာအကွယ်ပေးထားသည်။ မေးခွန်းများမေးမထားသည့်ငွေပြန်အမ်းမည့်အာမခံချက်!
အသုံးပြုရန်ရက်ပေါင်း ၉၀ ရှိသည် WTE သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဝင်ငွေကို 100X တိုးပွားစေမည့်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာပြီးနောက်၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစာရွက်ပေါ်တွင်ကြည့်။ သင်အနည်းဆုံး ၁၀၀X အားသင်၏လက်ရှိ ၀ င်ငွေကိုမသုံးကြောင်းပြောလျှင် WTE သို့မဟုတ်သင်အနည်းဆုံးသင်၏ငွေတန်ဖိုး၏အဆ ၁၀၀ (၁၀၀၀% ROI) မရရှိခဲ့ပါကသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာစွာပြန်လည်ပေးဆပ်ပါမည်။ WTE ပလက်ဖောင်း။
ထို့အပြင်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲသင်အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေရလိုပါကသင်၏ငွေကိုချက်ချင်းပြန်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမလုပ်ရတဲ့။ စကားမစပ်ကျေနပ်ရောင့်ရဲသောဖောက်သည်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မြှုပ်နှံထားပါသည်။ သင်မှအမြတ်အစွန်းမသွားဘူးဆိုရင် WTE Platform, ငါတို့သည်သင်တို့၏ setup ကိုအခကြေးငွေပြန်အမ်းရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။
လျှောက်ထားပါ WTE PLATFORM
အဆိုပါလျှောက်ထား WTE အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်စင်မြင့်ပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှစ်သက်သောလိုင်စင်နှင့်တပ်ဆင်ခအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာကိုသင့်ထံပေးပို့ပါမည် WTE ပလက်ဖောင်း။
သင့်အတွက်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီသင်ကြိုက်နှစ်သက်သော platform ၏လိုင်စင်နှင့် setup အခကြေးငွေများကိုသင်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
WTE သင့်ကို set up မည် WTE ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးပလက်ဖောင်း
သင့်ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့် World Trade Exchange သင်နှစ်သက်သောကို set up လိမ့်မည် WTE7ရက်အတွင်းသင့်အတွက်ပလက်ဖောင်း။ ထို့အပြင်တစ် ဦး WTE အတိုင်ပင်ခံသည်သင်၏ပုဂ္ဂလိကငွေကြေးကိုစတင်သုံးစွဲခြင်း၊ ထုတ်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်းစတင်ရန်သင်သိထားသင့်သမျှကိုသင်ပေးလိမ့်မည် WTE ပလက်ဖောင်း။
သင်၏ CURRENCY ကိုစတင်ခြင်း
သင်၏ပလက်ဖောင်းကိုတည်ဆောက်ပြီးပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစတင်ရန်၊ သင်၏ဝင်ငွေကိုရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ၁၀၀X အထိမြှောက်ရန်နှင့်သင်၏စီမံကိန်းများသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရန်ပုံငွေစတင်ရန်၎င်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အသင်းဝင်များအတွက်သာဖြစ်သည်။
Join ဖို့ဒီမှာနှိပ်ပါ WTE